Inona no lanjan'i Joanna sy Chip Gaines? Mikarokaroka ny fananan'ny mpivady 'Fixer Upper' rehefa miomana amin'ny fanombohana Magnolia Network izy ireo - Pop-Kolontsaina
Inona no lanjan'i Joanna sy Chip Gaines? Mikarokaroka ny fananan'ny mpivady 'Fixer Upper' rehefa miomana amin'ny fanombohana Magnolia Network izy ireo
Joanna sy Chip Gaines dia malaza amin'ny famolavolana sy fanavaozana andian-trano, Fixer Upper. Izy ireo dia mpiara-miasa amin'ny marika ary vonona ny hitondra sehatra Discovery + andrasana fatratra, Magnolia Network.
Magnolia Network dia hanao premiere amin'ny 15 Jolay ary ny Fixer Upper dia hahazo famerenana indray. Joanna sy Chip Gaines vao haingana no nankalaza ny faha-18 taonany.
aiza no aleha rehefa mankaleo ianao
Sarobidy Joanna sy Chip Gaines
ny harato net an'i Joanna sy Chip Gaines dia manodidina ny $ 10 tapitrisa isanisany, izay mahatratra 20 tapitrisa dolara. Ny harena ananany ankehitriny dia vokatry ny fahombiazan'ny Fixer Upper, satria nahazo vola manodidina ny 30000 $ isaky ny fizarana izy ireo.
Vakio ihany koa: Aiza no ipetrahan'ny fianakaviana Smithy? Nahazo fanohanana an-tserasera ny fianakavian'i TikTok taorian'ny famonoana ny tranon'ny ankohonany ary nodorana
Saingy niatrika fatiantoka vitsivitsy izy mivady rehefa nisy fitoriana $ 1 tapitrisa napetraka tamin'izy ireo tamin'ny taona 2017. Nolazaina fa mpanavakavaka izy ireo ary mpanohitra ny LGBTQ. Magnolia Real Estate dia nametraka ny fitoriana ary nilaza fa nividy ny mpiara-miasa amin'izy ireo i John L. Lewis sy Richard L. Clark nefa tsy nanonona ny fifanarahana HGTV tamin'ilay fampisehoana.
Rehefa nanontaniana momba ny fanavakavaham-bolon-koditra sy fanoherana ny LGBTQ izy dia nanambara i Joanna Gaines fa tsy namela azy hatory tamin'ny alina.
sin cara tsy misy sarontava
Fa ankoatry ny zava-drehetra dia nahazo loka maro i Joanna sy i Chip Gaines. Voatendry ho an'ny loka Critics 'Choice Award ho an'ny' Best Reality Show Host ', ary i Joanna dia notendrena ho loka People's Choice Award ho an'ny Star TV Favorite Reality.
Vakio ihany koa: Iza moa i Sean 'Poopies' McInerney? Ny zava-drehetra momba ny kintana Jackass izay niaritra manaikitra antsantsa mahatsiravina nandritra ny fotoana naharesy ny Discovery's Shark Week
Ny tranon'i Joanna sy Chip Gaines any Waco, Texas, dia natao tamin'ny 1895 ary i Chip dia nanova azy io ho trano lehibe misy toerana malalaka ho an'ny zanany. Ny trano dia manana fanaka hazo fitehirizana antitra sy nosy lakozia izay latabatry fiombonambe tamin'ny voalohany.
sipa te hanafina tsiambaratelo ny fifandraisana
Joanna sy Chip Gaines dia tompon'ny tsenan'ny Magnolia izay amidy ireo karazana fomba fiainana isan-karazany.
Vakio ihany koa: Spider-Man: Tsy misy lalana any an-trano 'Black and Gold' fihenjanan'akanjo - Naneho hevitra ireo mpankafy ny fitoriana mystika mety ho nataon'i Doctor Strange
Ampio Sportskeeda hanatsara ny fandrakofany ny vaovao momba ny kolontsaina pop. Raiso izao ny fanadihadiana mandritra ny 3 minitra.
lavo amin'ny fitiavana ny lehilahy manambady
zavatra atao rehefa ny an-trano sy ny noloahany
ahoana no ahafantarako raha misy tovovavy liana
fihaonana voalohany amin'ny bandy an-tserasera
safidy foana tsy laharam-pahamehana
manana fitiavana amiko ve ny mpiara-miasa amiko?